FALANQEYN KOOBAN: Dawladda Faderaalka & D/Gobaleedyada oo markale kala tagaya, Maxaase xigi kara hadda? – Puntlandtimes
FALANQEYN KOOBAN: Dawladda Faderaalka & D/Gobaleedyada oo markale kala tagaya, Maxaase xigi kara hadda?
April 26, 2018 W LAASCAANO
DUBIA(P-TIMES) – Markale ayay cirka isku shareertay xiisadda u dhaxeysa dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Dhexe iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaana xiisaddu ay ku wajahan tahay isla qadiyaddii Khaliijka oo markale ay dhinacyadu siyaabo kala gedisan ula kala safteen.
Ficiladii dawladda Faderaalka ee ku aadaana Imaaraatka Carabta ama saameyntiisa ku lahayd dawladda dhexe ayaa ah kuwaa loo arkayay in markale ay hurin karaan xiisaddii horey u dhexmartay dawlad gobaleedyada iyo dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
In hadda ay dib u bilaabato xiisadda kala xigsashada wadamada Carbeed ee Khaliijka, waxay ka dhalatay go’aamo ay qaaday dawladda Faderaal ee Muqdisho, kuwaas oo ay dawlad gobaleedyadu u arkayeen kuwa laga leeyahay dano siyaasadeed oo gaar ah, waxaana ka mid ah.
Labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxay isku raaceen in gabi ahaanba Soomaaliya laga mamnuuco Shirkada DP WORLD ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta, taas oo gacanta ku haysa Dekedaha Boosaaso & Berbera.
Dawladda Faderaalku waxay weerartay siyaasiin iyo dad ay ku tuhmayso in ay ka soo horjeedaan ficilada dawladda Qadar ay ka wado gudaha Soomaaliya, waxaana weerarkaas si gaar ah loola beegsaday Xildhibaano, Siyaasiin & Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Prof, Jawaari oo ugu dambeyntii ay xaaratay.
Lacag fara badan oo qeyb ka ahayd tababarada ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed ayna bixisay dawladda Imaaraatka Carabta ayaa si aan wanaagsaneyn dawladdu u wajahday, waxaana lacagtaas qeyb kamid ah lahaa dawlad gobaleedyada oo ay kamid tahay Puntland.
Dawladda Faderaalku iyadoon waxba latashi ah la sameynin dawlad gobaleedyada ay tababarada ciidan ka wadaan Imaaraatku waxay go’aamisay in ay la wareegtay ciidamadii Imaaraatku caawin jiray, ayna gabi ahaanba joojiyeen xariirkii ama Iskaashigii dhinaca Milateri, talaabadaas oo soo dadajisay in ay Imaaraatku bilaabaan in ay qalabkooda Milateri iyo tababarayaashoodaba kala baxaan Xeryo kuyaalay Boosaaso, Muqdisho & Kismaayo.
Afartan talaabo ee ay qaaday dawladda Faeraalka oo la rumeysan yahay dhamaantood in ay ka soo go’een oo kaliya dhinaca Xukuumadda ayaa haddana aysan jirin wax ay isku weydiiyeen dhinacyada Siyaasaddu, gaar ahaana dawlad gobaleedyada oo saameyn toos ah ay ku yeelatay go’aanada la qaatay qaarkood.
Puntland ayaa ah cidda ugu horeysay ee ay saameysay ceyrinta DP WORLD iyo Tababarayaasha Imaaraatka Carabtu, waxayna Puntland cadeysay mawqifkeeda oo ay sheegtay in DP WORLD iyo Tababarayaashu aysan ka bixi doonin deegaanadaas oo ay ka hayaan howlo muhiim.
Taas waxaa xigay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu u safray dalka Imaaraatka Carabta, wuxuuna la hadlay maanta warbaahinta caalamiga ah, wuxuu u sheegay in dalku yahay Federaal aysana jirin cid go`aan iska qaadan karta, taas oo haddii ay dhacdo buu yiri keeni karta xaalad kale oo halis badan.
Madaxweynaha Puntland wuxuu si cad oo aan leex-leexad laheyn u sheegay in dawladda Faderaalka Soomaaliya ay wax ku tahay dawlad gobaleedyada, ayna tahay in latixgaliyo horumarka iyo Midnimada Soomaaliya, tas oo lagu gaari karro buu yiri in la sameeyo Wadatashi iyo isu tanaasul howlaha horumarka ah.
Mr, Gaas ayaa adeegsaday weedha ah ‘’Muqdisho Somalia ayay ku taal, laakiin Soomaaliya oo dhan maahan Muqdisho’’ waana jawaab adag oo kusocota dawladda Faderaalka Soomaaliya, oo maalmihii ugu dambeeyey mashaariic fara badan oo dhanka Horumarinta ah ka wada magaaladaas.
Sidaas oo kale Madaxweynaha Jubbaland & Madaxweynaha Koonfur Galbeed labaduba waxay si toos ah ugu xiran yihiin siyaasadda Imaaraatka Carabta oo ay aaminsan yihiin in Soomaaliya aysan maanta abaal noocaas u gali karin Imaaraatka, ka dib sannado dheer oo uu hoy u ahaa Shacabka Soomaaliyed.
Madaxweynaha Jubbaland wuxuu kusugan yahay magaalada Dubia ee dalka Imaaraatka Carabta, sidaas oo kalena Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa todobaad ka hor ka tagay magaalada Dubia, isagoo kulamo la qaatay Madaxda arrimaha dibada ee dalkan Imaaraatka Carabta.
Xukuumada uu hogaamiyo Ra`iisulwasaare Xasan Cali Kheyre waxaa lagu eedaynayaa in ay Turkiga & Qadar oo kaliya u aragto cidda leh iskaashiga lala wadaagayo wadamada Carbeed, taasna waxay muujisay dhaawac kale oosiyaasadeed kaas oo aan la aqoon waxa uu ku dambeyn doono.
Falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa leh suuragalnimada waxyaabaha ka dhalan kara halkaas marka ay joogto waxaa kamid ah in qolo kasta ay gasho weerar iyo Is difaac xoog badan, kaas oo aan la aqoonin waxa ka dhalan doono, laakiin marka ay taagan tahay in arrimaha dibadda & Mashaariicda waa weyn laysku qabtaa waxay soo dadajin kartaa arrimaha siyaasadda oo aan marnaba laga helin daganaansho siyaasadeed.
marka laga hadlayo arimaha siyaasadda somaliya , waxaa lays waydiin karaa dowlada soomaliya ma si xalaal ah bay ku timid , mise musuq maasuq , sida dadka intiisa badan ula muuqata somaliya , waxa ka dhashay dowlad ay baarlamaanka doorteen madaxweynaha , madaxweynahaha uu soo magacabey raysalwasaare , raysalwasaarahana uu soo disay dowlad , ma sidaas baa , mise wax kale baa jira aan dib ugu noqono bilowgii burburka somaliya , dagaaladii sokeye , waxaa waheliyay dagaalo diineedyo ka jiray dalka , sanadkii 1992 , waxaa heshiis dhex maray ururka al-itixaad iyo ganacsato reer boosaaso ah , waxayna ku heshiiyeen in ururka al-itixaad saldhig ka dhigto Boosaso , dhamaan rugahiis ururka al-itixaad waxay u soo guureen boosaso , waxaana halkas laga saaray ururkii SSDF oo ka talinayay puntiland , mudo ka dibna ururka al-itixaad , waxay la wareegeen puntland , waxaana halkas ka dhashay dagaal u dhexeeya ururka al-itixaad iyo SSDF, waxaana dagaalkas looga guulaystay ururka Alitixaad , ka dib , sanadkii 2000 , waxaa lagu soo dhisay dalka jabuuti , dowlad ay soo dhistay ururka Al-itixaad , waxaana madaxweyne loogu doortay C/qaasim Salad Xasan , dowladaas ganacsatada iyo ururka Alitixaad ee boosaso way taageereen , waxaana magalada boosaso ka soo cararay madaxweynahii puntiland ee waqtigas ,dowladaasna cartana aad baa logu soo dhaweeyay boosaaso , mudo 9 bilood ka dib waxaa dib ugu noqdey magaladas madaxweynahii puntland oo wata ciidan aad u xoog badan , sanadkii 2004 , waxaa madaxweyne loo doortay madaxweynahii puntiland ee waqtigaas , ka dib , wuxuu isku dayay inuu muqdisho tago , waxaana dad weynahii ku noolaa magaladaas loo tusay in dowlada c/laahi yusuf ay tahay dowlad dabadhilif amxaaro u ah oo ciidan shisheeye dabada ku wadata , waxaana ay ururka al itixad ku dhawaaqay jihaad ayadoo la ogsoon yahay in itoobiya iyo ururka al itixaad dagaal ka dhaxeeyo ,
ka dib , sanadkii 2008 waxa taladii soomaliya la wareegay ururka alitixaad oo magac kale samaystay , waxaana hogaaiminayay sh. shariif , ilaa iyo xiligaas , waxaa talada dalka iskaga dambeeyay ururka alitaax oo magacyo kala duwan la baxayay , in kastoo aysan dalka wada gaarin , hadana waxaa hortagan inay dalka wada gaarsiiyaan xukunkooda puntland , waxaana hadda la filayaa in dagaal cusub ka dhex bilaabo ururka al-ittixaad oo magac cusub wada iyo puntlland , inkastoo ay dowladda puntland ay leedahay dalal saaxiibo deris la ah iyo kuwo kale , ururka al-itixaad oo ganacsadayaal ah , xoolo badana ku haysta dalka imaaraat carabta , waxa laga yaabaa in imaaraatka uu xayiro ganacsiga iyo xoolaha ururka alitixadka , waayana shacab uu ku dhexdhuunto ,